Tanteraka omaly tetsy Anosy ny sonia fifanekem-piaraha-miasa mifandraika amin’izany hanatanteraka ilay tetikasa Pnan na drafitrasam-pirenena ho an’ny tsy fanjarian-tsakafo. Raha araka ny fantatra tokoa mantsy dia very 750 dolara isan-taona isika eto Madagasikara vokatr’izay tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka mahazo ny ankizy latsaky ny dimy taona izay. Nambaran’ny profesora Rakotonirina Julio, minisitry ny fahasalamam-bahoaka nandritra izany ary fa eo anivon’ny lafiny teknika kokoa no hanombohan’ny roa tonta ny fiaraha-miasany, haharitra telo taona. Tafiditra ao anatin’izany ny fikirakirana ireo karazana antontan’isa maro samihafa hahafahana mitady vahaolana haingana. Raha mbola mahatratra 47,3 % ohatra ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka mahazo ny ankizy eto amintsika dia ezahina ny hampihena io taha io hatrany amin’ny 30 % hatramin’ny taona 2027. Mitentina 80 tapitrisa dolara ny famatsiam-bola ho an’ity tetikasa izay vatsian’ny Banky iraisam-pirenena vola raha ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka, ny fanjakana sy ny Unicef no handray an-tanana izany. Zaza miisa 5 tapitrisa moa no ezahina hahazo tombontsoa amin’izany miampy vehivavy 400 000 isa sy mpanentana ara-pahasalamana marobe.